İzmir Dawlada Hoose ee Magaala Weyn Waxay Dhisay Gawaarida Baarkinka ee loogu talagalay Gawaarida Xogaa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmirİzmir Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha Waxaa loo Sameeyay dhigashada Baabuur dhigashada loogu talagalay baabuurta xirashada
04 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
degmada izmir buyuksehir waxay dhistay gawaarida gawaarida xamuulka qaada
Izmir degmada Metropolitan, ugu horeeyay ee noociisa ah u saxiixay mashruuc la la dhigto baabuurta duugga ah aasaasay Turkey. Meesha la dhigto ee baabuurta la dhigto oo ku taal Menemen ayaa noqon doonta xalka dhibaatada ballaaran ee magaalada.
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay xal rasmi ah uhelay dhibaatada gogol dhaafka magaalada. Dawlada hoose, degmada Menemen ee xaafada Kasimpasa ayaa dhistay baarkin gawaarida. Wadada Seyrekköy oo ku fadhida 18 349 mitir murabac ah ayaa leh 880 baabuur. Parking, Turkey u adeegi doonaa sida duugga ugu horeysay la dhigto ee degmada.
Qeybta Booliska Magaalada Izmir ee Boliiska Dowlada hoose ee gacanta ku heysa gawaarida xamuulka ah ee laga tagay ayaa bilaabay in lagala baxo wadooyinka. Waxaa jira kamaradaha amniga iyo ilaalada amniga xarunta, halkaas oo lagu kaydin doono gawaarida qashinqubka, kuwaas oo qatar ku keenaya amniga isla markaana abuuraya wasakhowga deegaanka iyo muuqaalka.
Codsigii ugu horreeyay ee Balçova
Ka kaxaynta baabuurta xamuulka ah waxay bilaabatay 2 Janaayo 2019 degmada Balçova. Kooxaha degmada Balçova ka dib markii la raacay nidaamyadii lagama maarmaanka u ahaa, jidadka, jidadka, dhul faaruqa ah iyo wixii loo haystay hanti gaar loo leeyahay, oo ay ka xireen milkiilayaashu ama milkiilayaashu ma gaari karaan baabuurta waaweyn, Qaybta Booliska Boliiska Magaalada Iibsiga ee Waaxda Boliiska, kooxaha booliiska ee degmada Balçova Shaqada wadajirka ah ee kooxaha taraafikada ee waaxda booliiska, gawaarida lagu kala qaado Menemen'daki ayaa loo qaadaa aagga keydka.
Gawaarida xamuulka ah, ka dib markii ay ka saareen 11ka degmo ee dhexe ee dalabka ayaa loo qorsheeyay inay ku sii socdaan degmooyinka kale ee Izmir Gawaarida ku xardhan baabuurta xamuulka ah waxaa loo wareejin doonaa Wasaaradda Maaliyadda lix bilood kadib gawaarida cusubna waxaa loo jiidi doonaa goobta baabuurta la dhigto ee la faaruqiyey.
Gawaarida loogu talagalay baabuurta 440 ee laga soo galo albaabka tareenka hore ee magaalada Izmir
Gawaarida gawaarida xoqida